अमेरिकामा नेपाली ए कता ? रुवाजस्तो – RAJESHares KOIRALAnd
अमेरिकामा नेपाली ए कता ? रुवाजस्तो
February 12, 2011 July 29, 2011
अमेरिका- वर्षमा एकपल्ट गोठधुप गर्ने चलन पूर्वी नेपालमा अझै छ । गोठधुपमा एकै गोत्रका मानिस भेला हुन्छन्, सामान्यतः पुरुष मात्र । गोठमा हुने उत्पादन मूलतः दूधमा आधारित पूजा हो यो । यी पूर्वीया किसानको यो चलन तीनकै घरपालुवा गाई, भैसीको रक्षार्थ हो भन्ने मैले बुझेको छु । यो पूजामा बलि दिंइदैन । कोइरालाकै गोठधूपको कुरा गर्दा हाम्रो (कोइराला) गोत्र ‘मौद् गल्य’ सँग मिल्ने कार्की, तिमल्सिना (तिम्सिना) का प्रतिनिधि पनि आउँछन्, त्यो पनि समय र सञ्चारले भ्याउँदा । खेतीपातीको फुर्सद निकालेर गरिन्छ, यो पूजापाठ हो । खिर, सेलरोटी जस्ता परिकार बनाउने, पूजा गर्ने, चढाउने अनि प्रसाद बाँढ्ने र खाने । पूजामा उपस्थित व्यक्तिले केही प्रसाद आफ्ना परिवारका सदस्य निम्ति बोकेर घर लैजाने गर्छन् । यसरी यो गोठाले संस्कृतिमा पनि यस्तो समाजिकरणले ठूलो योगदान दिएको छ । जानेका बुझेकाले रिठ्ठो नबिराइ गरेका छन् त भन्न मिल्दैन तर धानेका छन् ।सन्दर्भ, अमेरिकामा नेपाली एकताको । जुलाई पहिलो साता अमेरिकाका नेपाली उत्तरपूर्वी शहर बोस्टन पुगे । त्यहाँ मौतगल्य गोत्रको गोठधूपजस्तै त्यो नेपाली भनिनेको गोठधूप थियो । अमेरिकी भूमीमा वर्षेनी जुलाई ४ (अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवस) लाई लक्षित गरेर गरिने गोठधूप सधैं विवादको विषय बन्दै आएको छ । झगडा र जालझेल नभई पछिल्ला कुनै भेला सकिएका छैनन् । हरि शर्मा मुडभरीले सन् १९८३ जुलाईमा द एशोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिकाज (एएनए) खोलिदिए । कसैलाई लाग्दो हो, एएनए संस्थापक शर्माले यो के झमेला लगाई दिए ? कोही ठान्दा हुन्, यो राम्रै हो । अमेरिका पसेको नयाँ नेपाली यस्तो भेलालाई ठिक ठान्दो हो । युवा जोश भएका ठिटाहरु के न पो हुन्छ भनेर पुग्छन् । कुरो ठुस्स गन्हाउँछ । वर्षौंदेखि भेला देख्दै आएको नेपालीले भने यसप्रति आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सक्ने भएको छ । त्यसैले खुलेर गाली पनि गर्छन् । भेलाप्रति आफ्नो विचार राख्नु स्वभाविक हो ।
एएनए भेलामा बढी औपचारिकता छ । स्कुल, कलेज बिदा हुने समय (वर्षे बिदा) पर्ने भएकाले धेरैजसो अभिभावकलाई छोराछोरी लिएर कता जाऔं भइरहेको हुन्छ । त्यस अर्थमा यो भेला ठिकै हुन्छ । भेलामा निहुँमा गन्तव्यमा पुग्यो । होटल बुकिङ गर्‍यो । बेलाबखत यस्सो भेलामा निस्क्यो पनि । नेपाली खानेकुरा किन्यो र खायो । ऊ त भेला भनेर आयो । तर छोराछोरीलाई नेपाल र नेपालीको के मतलब ? शहरको रफुचक्कर हुन फुत्त निस्क्यो । धेरैजसो हुने छलफल र विशेष कार्यक्रममा उपस्थिति नै न्यून देखिंदा यहि अनुमान लगाउन सकिन्छ । योभन्दा लाजमर्दो अरु के नै हुन्छ ?
अमेरिकामा नेपाली एकता किन अप्ठ्यारोमा ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । हामी नेपालमै पनि एकता बनाउने अभ्यासमा धेरै चुकेका छौं । संविधानसभा निर्वाचनअघि नेपालमा करिब एक सय पार्टी दर्ता थिए । पार्टी धेरै भए त भन्न मिल्दैन । यो नागरिक अधिकार हो । भन्न खोजेको के पनि हो भने जसरी हामी नेपालमा हजार मुख हुन्छौं, त्योभन्दा राम्रो अवस्था अमेरिकामा बस्नेको छैन । यसो भनेर हामी विषय र प्रसंगबाट फुत्त बाहिर निस्कन सकिदैन । अमेरिका आउने नेपाली कुन हैसियतमा आएको छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा पनि नेपाली एकताको विभिन्न कोण फेला पर्छन् । राणाकाल र शाहकालमा उनीहरुकै नातागोताका मानिस जसरी अमेरिका पसे, तीमध्ये कयौ त अझैं आफूलाई नेपाली हुँ भन्न मन पराउँदैनन् । पेशागत विकास निम्ति आएको नेपाली आफ्नो परिचय दिन चाहन्छ, लुकाउँदैन । चिठ्ठामा आएकाको अवस्था फरक छ । सुध्रन सक्ने सुध्रेका छन्, नसुध्रने जति उध्रेका छन् । काम गर्छु र खान्छु भन्ने मात्रको जमातलाई न नेपालमा फुर्सद थियो, न यहाँ छ । एक अर्थमा अमेरिका आएर पनि काठमा काँटी गाडिएझै गाडिएका नेपालीको अवस्था चाहिं अप्ठ्यारोमा नै छ । न्यूयोर्क, सिकागो, लस एन्जलस जस्ता शहरमा दिनभर काम गरेर लखतरान घर फिर्नेलाई कुनै एकताले छुँदैन । गैरकानुनी रुपमा वर्षौं बसेको अर्को जमातको लेखाजोखा न नेपाल सरकारसँग छ, न एएनए वा एनआरएनले नै गर्छ । जसरी क्षेत्र र जातभातका दल नेपालमा विद्यमान छन्, त्यसरी नै एकताको एउटा साङ्लोले अमेरिकी नेपालीलाई बाँध्न निकै ठूलो कसरत जसरी छ ।
सुरुवात जुन सोचले गरिएको भए पनि एएनएले आकार लिन सकेको छैन । एएनए यस अर्थमा अहिले अमूर्त नै छ । यसमा नेपालीको एकता रुवा (कपास) को गुजुल्टोजस्तो । देख्दा एउटै डल्लो । तर कहिं जोडिएको छैन । पछिल्लो २८ औं एएनए सम्मेलनले गैरआवासिय नेपालीको संगठन (एनआरएन) का दुइ पाटालाई एकै ठाउँमा ल्यायो । यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । अमेरिकी जनगणना २०१० मा थोरै भए पनि नेपाली एकताको प्रयास देख्न पाइयो । जनगणनाबाट नेपालीको संख्या सरकारी सुविधा पाउने गरी किटान भए, सबैका लागि फाइदाको विषय हो । यसमा जति सक्रियता हुनुपर्थ्यो, तर त्यो यथेष्ठ रहेन । पुराना नेपाली पनि अहिले एनआरएन र एएनए जस्ता संस्थासँग निकट हुन खोज्दैछन् । यसले आशा जगाएको छ ।
उच्च प्रविधिको मुलुकमा रहेर पनि त्यसको प्रयोग गर्दै सिंगो अमेरिकी नेपाली जमातलाई एउटा साङ्लोमा बाँध्न सक्नु एएनए, अमेरिकी एनआरएनको पहिलो काम हो । यसमा उनीहरु सफल हुनै पर्छ।
(कान्तिपुर दैनिकका वरिष्ठ उपसम्पादक कोइराला अहिले अमेरिकामा छन् ।)
(२०१० जुलाई ३०, नेपाली पोष्ट डट कममा पोस्टिङ भएको।)
One thought on “अमेरिकामा नेपाली ए कता ? रुवाजस्तो”
Dilli Acharya says:
Koirala ji! tapainko Gotra Maudgaly (मौद् गल्य) hunu parne ho. Plz once check it.
LeaveaReply to Dilli Acharya Cancel reply